ShwengweGames - Page 468 of 481 - News & Media
COVID-19 ရောဂါစောငျ့ကွပျကွညျ့ရှုမှုနှငျ့ပတျသကျ၍ သတငျးထုတျပွနျခွငျး(၂၀-၄-၂၀၂၀) ရကျနေ့၊ ည (၈:၀၀)နာရီ
၂။ အဆိုပါ လူနာသဈ (၆) ဦးကို သကျ ဆိုငျရာဆေးရုံမြားသို့ လှဲပွောငျး၍ သီးခွားထားရှိကုသမှု ပေးသှားမညျဖွဈပါသညျ။
၃။ ယနေ့ ည (၈:၀၀)နာရီ အထိ မွနျ မာနိုငျငံတှငျ COVID-19 ဓာတျခှဲအတညျပွုလူနာ စုစုပေါငျး (၁၁၇) ဦးရှိပွီဖွဈပါသညျ။
၄။ ယခုအခါ မွနျမာနိုငျငံရှိ ဓာတျခှဲအတညျပွုလူနာမြားအနကျ ရောဂါပိုးကငျးစငျသူ (၉)ဦး ရှိလာခဲ့ပွီး ၎င်းငျးတို့အနကျ (၄)ဦးအားယနေ့ (၂၀-၄-၂၀၂၀) ရကျနတှေ့ငျ ဆေးရုံမှဆငျးခှငျ့ပွုခဲ့သဖွငျ့ ဆေးရုံဆငျးသူ စုစုပေါငျး (၆)ဦး (Case-003၊ Case-004၊ Case- 007၊ Case-009၊ Case-021၊ Case-015) ရှိပွီဖွဈပါသညျ။ သို့သျောလညျး ၎င်းငျးတို့အား သတျမှတျရကျပွညျ့သညျအထိ အသှားအလာ ဆကျလကျကနျ့သတျထားပါသညျ။ ဝဘောဂီအထူးကုဆေးရုံကွီးရှိ လူနာ (၂)ဦးအား အထူးကွပျမတျ ကုသဆောငျတှငျ ဆေးကုသမှုပေးလကျြရှိပွီး ကနျြလူနာအားလုံး၏ ကနျြးမာ‌ရေးအခွအေနမှော တညျငွိမျကောငျးမှနျလကျြရှိပါသညျ။
COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း(၂၀-၄-၂၀၂၀) ရက်နေ့၊ ည (၈:၀၀)နာရီ
၁။ အမျိုးသားကျန်းမာရေးဓာတ်ခွဲမှုဆိုင်ရာဌာန (ရန်ကုန်) ၏ (၂၀-၄-၂၀၂၀) ရက်နေ့၊ (ပထမအသုတ်) စစ်ဆေးခဲ့သော ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၁၈၁) ခုအနက် (၆) ဦး၏ ဓာတ်ခွဲနမူနာတွင် COVID-19 ရောဂါပိုး တွေ့ရှိ (တွေ့ရှိ) ပြီး ကျန် (၁၇၅) ခုတွင် COVID-19 ရောဂါပိုးမတွေ့ရှိ (မတွေ့ရှိ) ပါ။
၂။ အဆိုပါ လူနာသစ် (၆) ဦးကို သက် ဆိုင်ရာဆေးရုံများသို့ လွှဲပြောင်း၍ သီးခြားထားရှိကုသမှု ပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
၃။ ယနေ့ ည (၈:၀၀)နာရီ အထိ မြန် မာနိုင်ငံတွင် COVID-19 ဓာတ်ခွဲအတည်ပြုလူနာ စုစုပေါင်း (၁၁၇) ဦးရှိပြီဖြစ်ပါသည်။
၄။ ယခုအခါ မြန်မာနိုင်ငံရှိ ဓာတ်ခွဲအတည်ပြုလူနာများအနက် ရောဂါပိုးကင်းစင်သူ (၉)ဦး ရှိလာခဲ့ပြီး ၎င်းတို့အနက် (၄)ဦးအားယနေ့ (၂၀-၄-၂၀၂၀) ရက်နေ့တွင် ဆေးရုံမှဆင်းခွင့်ပြုခဲ့သဖြင့် ဆေးရုံဆင်းသူ စုစုပေါင်း (၆)ဦး (Case-003၊ Case-004၊ Case- 007၊ Case-009၊ Case-021၊ Case-015) ရှိပြီဖြစ်ပါသည်။ သို့သော်လည်း ၎င်းတို့အား သတ်မှတ်ရက်ပြည့်သည်အထိ အသွားအလာ ဆက်လက်ကန့်သတ်ထားပါသည်။ ဝေဘာဂီအထူးကုဆေးရုံကြီးရှိ လူနာ (၂)ဦးအား အထူးကြပ်မတ် ကုသဆောင်တွင် ဆေးကုသမှုပေးလျက်ရှိပြီး ကျန်လူနာအားလုံး၏ ကျန်းမာ‌ရေးအခြေအနေမှာ တည်ငြိမ်ကောင်းမွန်လျက်ရှိပါသည်။
နှာခေါငျးစညျး Mask တပျရငျး နှုတျခမျးနီဆိုးလို့ရမယျ Mask ပုံစံကို အကွံပွုထားတဲ့ ဦးကြျောသူ
နိုငျငံကြျောရုပျရှငျသရုပျဆောငျ ပရဟိတ မငျးသားကွီး ဦးကြျောသူကတော့ COVID-19 ရောဂါကပျဘေးကွောငျ့ ခေါငျးထဲဝငျလာတဲ့ ထူးထူးဆနျးဆနျးအတှေးကို “အျော…တရားဖွုတျလိုကျခြိနျမှာ မဆီမဆိုငျ တှေးမိပါရဲ့။ အျော… ကိုဗဈ19ဂယကျ တဈကမ်ဘာလုံးဖုံးလှမျးနခြေိနျမှာတောငျတောငျအီအီတှေးမိပါရဲ့။ နှုတျခမျးနီ (Lip Stick) ဈေးကှကျတော့ ပကျြပါပွီလို့ဈ ။” လို့သူ့ရဲ့ လူမှုကှနျရကျ စာမကျြနှာမှာဖျောပွထားပါတယျ။
ဦးကြျောသူကတော့ တရားမှတျနတောဖွုတျလိုကျခြိနျမှာပဲ COVID-19 ရောဂါကပျဘေးကွီး ကမ်ဘာတဈခုလုံးဖုံးလှမျးနတောကွောငျ့ တောငျတောငျအီအီလြှောကျတှေးနမေိပါတယျ။ COVID-19 ရောဂါကို ကွိုတငျကာကှယျခွငျးထဲမှာ နှာခေါငျးစညျး Mask တပျရမယျဆိုတာပါဝငျနတောကွောငျ့ သူကတော့ ထူးထူးဆနျးဆနျး နှုတျခမျးနီ (Lip Stick) ဈေးကှကျတော့ ပကျြပါပွီ ဆိုတဲ့ အတှေးဝငျလာပါတယျတဲ့။ ဦးကြျောသူတဈယောကျကတော့ COVID-19 ရောဂါကပျဘေးကွောငျ့ ထူးထူးဆနျးဆနျး နှုတျခမျးနီ (Lip Stick) ဈေးကှကျတော့ ပကျြပါပွီ ဆိုတဲ့ အတှေးဝငျလာတဲ့အကွောငျးတငျထားတဲ့ ပို့ဈမှာတော့ နိုငျငံကြျောရုပျရှငျသရုပျဆာငျ အဆိုတျောတဈယောကျဖွဈပွီး Sai Cosmetix ရဲ့ တညျထောငျသူစိုငျးစိုငျးခမျးလှိုငျကလညျး “ငိုနပွေီ ဦးရေ” ဆိုပွီး ပွောထားပါသေးတယျ။
CeleGabar ပရိသတျကွီးရေ နိုငျငံကြျောရုပျရှငျသရုပျဆောငျ ပရဟိတ မငျး သားကွီး ဦးကြျောသူကတော့ COVID-19 ရောဂါကပျဘေးကွီး ကမ်ဘာတဈခုလုံးဖုံးလှမျးနတေဲ့အခြိနျမှာပဲ ထူးထူးဆနျးဆနျး နှုတျခမျးနီ (Lip Stick) ဈေးကှကျတော့ ပကျြပါပွီ ဆိုတဲ့ အတှေးဝငျလာပါတယျတဲ့။ ပရိသတျကွီးရေ ဦးကြျောသူကတော့ နှာခေါငျးစညျး Mask တပျရငျး နှုတျခမျးနီဆိုးလို့ရမယျ Mask ကိုတောငျ အကွံပွုထားတာနျော။
နှာခေါင်းစည်း Mask တပ်ရင်း နှုတ်ခမ်းနီဆိုးလို့ရမယ် Mask ပုံစံကို ပြောပြလာတဲ့ ဦးကျော်သူ
နိုင်ငံကျော်ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင် ပရဟိတ မင်းသားကြီး ဦးကျော်သူကတော့ COVID-19 ရောဂါကပ်ဘေးကြောင့် ခေါင်းထဲဝင်လာတဲ့ ထူးထူးဆန်းဆန်းအတွေးကို “အော်…တရားဖြုတ်လိုက်ချိန်မှာ မဆီမဆိုင် တွေးမိပါရဲ့။ အော်… ကိုဗစ်19ဂယက် တစ်ကမ္ဘာလုံးဖုံးလွှမ်းနေချိန်မှာတောင်တောင်အီအီတွေးမိပါရဲ့။ နှုတ်ခမ်းနီ (Lip Stick) ဈေးကွက်တော့ ပျက်ပါပြီလို့စ် ။” လို့သူ့ရဲ့ လူမှုကွန်ရက် စာမျက်နှာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။
ဦးကျော်သူကတော့ တရားမှတ်နေတာဖြုတ်လိုက်ချိန်မှာပဲ COVID-19 ရောဂါကပ်ဘေးကြီး ကမ္ဘာတစ်ခုလုံးဖုံးလွှမ်းနေတာကြောင့် တောင်တောင်အီအီလျှောက်တွေးနေမိပါတယ်။ COVID-19 ရောဂါကို ကြိုတင်ကာကွယ်ခြင်းထဲမှာ နှာခေါင်းစည်း Mask တပ်ရမယ်ဆိုတာပါဝင်နေတာကြောင့် သူကတော့ ထူးထူးဆန်းဆန်း နှုတ်ခမ်းနီ (Lip Stick) ဈေးကွက်တော့ ပျက်ပါပြီ ဆိုတဲ့ အတွေးဝင်လာပါတယ်တဲ့။ ဦးကျော်သူတစ်ယောက်ကတော့ COVID-19 ရောဂါကပ်ဘေးကြောင့် ထူးထူးဆန်းဆန်း နှုတ်ခမ်းနီ (Lip Stick) ဈေးကွက်တော့ ပျက်ပါပြီ ဆိုတဲ့ အတွေးဝင်လာတဲ့အကြောင်းတင်ထားတဲ့ ပို့စ်မှာတော့ နိုင်ငံကျော်ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆာင် အဆိုတော်တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး Sai Cosmetix ရဲ့ တည်ထောင်သူစိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင်ကလည်း “ငိုနေပြီ ဦးရေ” ဆိုပြီး ပြောထားပါသေးတယ်။
CeleGabar ပရိသတ်ကြီးရေ နိုင်ငံကျော်ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင် ပရဟိတ မင်း သားကြီး ဦးကျော်သူကတော့ COVID-19 ရောဂါကပ်ဘေးကြီး ကမ္ဘာတစ်ခုလုံးဖုံးလွှမ်းနေတဲ့အချိန်မှာပဲ ထူးထူးဆန်းဆန်း နှုတ်ခမ်းနီ (Lip Stick) ဈေးကွက်တော့ ပျက်ပါပြီ ဆိုတဲ့ အတွေးဝင်လာပါတယ်တဲ့။ ပရိသတ်ကြီးရေ ဦးကျော်သူကတော့ နှာခေါင်းစည်း Mask တပ်ရင်း နှုတ်ခမ်းနီဆိုးလို့ရမယ် Mask ကိုတောင် အကြံပြုထားတာနော်။
လြှပျစဈမီတာဆောငျရနျ တနျးစီနစေဥျမူးပွီးလဲကသြှား‌တဲ့အမြိုးသား ရနျကုနျဆေးရုံကွီးမှာသဆေုံးသှား
ဧပွီ (၂၀) ရကျ ၁၁ နာရီခနျ့တှငျ စမျးခြောငျး ဗားကရာလမျးပျေါ တှငျ လြှပျစဈမီတာဆောငျရနျ တနျးစီနသေူအသကျ(၇၄) နှဈအရှယျအမြိုးသားတဈဦး ရုတျတရကျ မူးလဲသှားခဲ့သညျ။
အဆိုပါ မူးလဲသှားသူအား စမျးခြောငျးမွို့နယျ ပွညျသူ့ကနျြးမာရေးဦးစီးဌာနမှကနျြးမာရေးဝနျထမျးမြားနှငျ့အားမနျ လူငယျပရဟိတ အဖှဲ့တို့မှ ရနျကုနျ ဆေးရုံကွီးသို့ သယျဆောငျပေးပို့ခဲ့ပါသညျ။
အဆိုပါ အမြိုးသားမှာ သတငျးတပျဖှဲ့ ရဲအုပျအငွိမျးစား တဈဦးဖွဈပွီး ကြှနျးတော တောငျရပျကှကျ ခမျြးသာလမျးအမှတျ (၉) (၃လှာ) တှငျနေ ထိုငျ သူ ဦးကြျောဆနျးဝငျး (၇၄) နှဈဖွဈသညျ။ ဦးကြျောဆနျးဝငျး မှာ သှေးတိုး၊
ဆီးခြို နှငျ့ကြောကျကပျ ရောဂါတို့ရှိပွီး ရနျကုနျပွညျသူ့ဆေးရုံကွီးတှငျ နှလုံးကွပျမတျဆောငျ၌ ကုသနစေဉျ၁၂:၄၀ ၌ အမောဖေါကျလာပွီး (၁၃:၁၀) နာရီ၌ ကှယျလှနျ သှားပါသညျ။
Credit U Bo Bo Oo – ဘိုဘိုဦး
ဧပြီ (၂၀) ရက် ၁၁ နာရီခန့်တွင် စမ်းချောင်း ဗားကရာလမ်းပေါ် တွင် လျှပ်စစ်မီတာဆောင်ရန် တန်းစီနေသူအသက်(၇၄) နှစ်အရွယ်အမျိုးသားတစ်ဦး ရုတ်တရက် မူးလဲသွားခဲ့သည်။
အဆိုပါ မူးလဲသွားသူအား စမ်းချောင်းမြို့နယ် ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနမှကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများနှင့်အားမန် လူငယ်ပရဟိတ အဖွဲ့တို့မှ ရန်ကုန် ဆေးရုံကြီးသို့ သယ်ဆောင်ပေးပို့ခဲ့ပါသည်။
အဆိုပါ အမျိုးသားမှာ သတင်းတပ်ဖွဲ့ ရဲအုပ်အငြိမ်းစား တစ်ဦးဖြစ်ပြီး ကျွန်းတော တောင်ရပ်ကွက် ချမ်းသာလမ်းအမှတ် (၉) (၃လွှာ) တွင်နေ ထိုင် သူ ဦးကျော်ဆန်းဝင်း (၇၄) နှစ်ဖြစ်သည်။ ဦးကျော်ဆန်းဝင်း မှာ သွေးတိုး၊
ဆီးချို နှင့်ကျောက်ကပ် ရောဂါတို့ရှိပြီး ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးတွင် နှလုံးကြပ်မတ်ဆောင်၌ ကုသနေစဉ်၁၂:၄၀ ၌ အမောဖေါက်လာပြီး (၁၃:၁၀) နာရီ၌ ကွယ်လွန် သွားပါသည်။
မိုး နှငျ့ မုနျတိုငျး အန်တရာယျ
၂၀၂၀ ဧပွီလ ၂၅ရကျနမှေ့ မလေ ၂ရကျနအေ့တှငျး မွနျမာတဈနိုငျငံလုံးမှာ မိုးတှရှောလာနိုငျပါတယျမပေထမပတျမှာ မုနျ တိုငျးအန်တရာယျလညျးရှိပါတယျ နှရောသီကောကျပဲသီးနှံစိုကျပြိုးထားသူမြား
ရထေိမခံနိုငျသော အုတျလုပျငနျး ဆားလုပျငနျး ဆောကျလုပျရေးလုပျငနျးမြားလုပျဆောငျနသေူမြား ပကျြစီးဆုံးရှုံးမှုမရှိရလအေောငျ ကွိုတငျပွငျဆငျကွပါလို့အကွံပွုလိုကျရပါတယျ
19/04/2020 at 3:31pm (MMT) SU SU SAN
မိုး နှင့် မုန်တိုင်း အန္တရာယ်
၂၀၂၀ ဧပြီလ ၂၅ရက်နေ့မှ မေလ ၂ရက်နေ့အတွင်း မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးမှာ မိုးတွေရွာလာနိုင်ပါတယ်မေပထမပတ်မှာ မုန် တိုင်းအန္တရာယ်လည်းရှိပါတယ် နွေရာသီကောက်ပဲသီးနှံစိုက်ပျိုးထားသူများ
ရေထိမခံနိုင်သော အုတ်လုပ်ငန်း ဆားလုပ်ငန်း ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများလုပ်ဆောင်နေသူများ ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုမရှိရလေအောင် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ကြပါလို့အကြံပြုလိုက်ရပါတယ်
အမရေိကနျ Lockdown ၊ဂြာ မဏီ Lockdown ၊ အိန်ဒိယ Lockdown နှငျ့ မွနျမာပွညျ Lockdown ခွားနားခကျြ
လ တျတေ လာ ပွောနကွေ တဲ့ Lockdown
Lockdown လုပျပါဆိုပွီး ရှဆေုံ့းနေ တောငျးဆိုခဲ့တဲ့အထဲမှာ ကြှနျတျောပါပါတယျ။
တကယျလကျတှမွေ့ပွေငျမှာကတြော့ Lockdown လုပျဖို့ဆိုတာ ဘယျနှဈရကျလုပျမှာလဲ၊ဘယျလောကျကွာကွာလုပျထားကွမလဲဆိုတာအတှကျ အဖွမေရှိပါဖူး။
အမရေိကနျမှာ Lockdown လုပျထားတော့စီးပှားရေး ပကျပကျစကျစကျ ထိခိုကျ၊အလုပျလကျမဲ့တှေ တအားမြားလာဒါကွောငျ့အမရေိကနျ သမ်မတက Lockdown ပွနျဖှငျ့ဖို့အားထုတျနပေါတယျ။
ဂြာမနီမှာလဲ ထိုနညျးလညျးကောငျးဘဲ.. Lockdown ဆကျထားရမှာလား၊ ဖှငျ့ရတော့မှာလာဆိုတာ ဂြာမနီဝနျကွီးခြုပျအတှကျ ခကျခဲနတယျ။
နောကျတခကျြအိန်ဒိယမှာ ရောဂါပိုးစတှထေဲ့က အိန်ဒိယအစိုးရက lockdown နှဈပတျကွငွောပွီးတနိုငျငံလုံးကို အိမျအပွငျမထှကျရ အမိနျ့ထုတျလိုကျတယျ အိမျအပွငျထှကျတဲ့သူတှကေို ရဲတှကေ တုတျတှနေဲ့ လိုကျရိုကျကွတယျ ။နှဈပတျပွညျ့လို့ Lockdown ရကျထပျတိုးမယျလို့ဆုံးဖွတျလိုကျတဲ့အခြိနျအိန်ဒိယနိုငျငံနယူးဒလေီမွို့မှာလူပေါငျးသနျးနဲ့ခြီပွီးလမျးပျေါထှကျလာကွတယျ။သူတို့ပွောတာက မွို့ပျေါတကျလာအလုပျလုပျဖို့အခုကအိမျတှငျးအောငျးနရေတယျအစာအ ငတျခံပွီးတော့အသမေခံနိုငျဖူး ရှာကိုပွနျကွမယျ့ဆိုတဲ့လူအုပျကွီးအစိုးရကထိုငျကွညျ့နရေတယျအခု india မှာပိုးတှလေူ့နာတှတေရှိနျထိုးတကျလာနတေယျ။
မွနျမာပွညျမှာရောအခုခြိနျ ပိုးတှတေ့ာ ကိုးဆယျလောကျရှိနပွေီ။အခုခြိနျ Lockdown ခလြိုကျရငျမရဖူးလားရတာပေါ့ဗြာ။
Lockdown ခရြတာ ဘာမှ မခကျဖူး Lockdown ကို ဘယျနှဈရကျအထိလုပျမှာလဲဆိုတာ ဘယျသူ့ဆီမှာမှ အဖွမေရှိဖူးအခုခြိနျ Lockdown လုပျလိုကျပွီးမှ လကုနျတဲ့အခြိနျမှာမပွောကောငျးမဆိုကောငျးပိုးတှထေပျတှရေ့ငျ Lockdown ကို ဆကျလုပျမှာလားပွနျဖှငျ့ရမှာလား…။
Lockdown လုပျတာ ရကျကွာတာနဲ့အမြှ စီးပှားရေး ပိုးဆိုးပကျစကျထိမယျ… ဆငျးရဲသားတှေ၊ တနလေု့ပျတနစေ့ားတှေ သူတို့ဘဝတှေးတောငျ မတှေးရဲဖူး…အစိုးရကရောသူတို့အတှကျ ဘယျနှဈရကျစာလောကျ ထောကျပံ့ပေးနိုငျမှာလဲ။ငတျလာတဲ့အခြိနျ ဆငျးရဲသားတှေ လမျးပျေါရောကျလာမယျ၊ အလုပျလုပျဖို့ဆိုပွီး ရနျကုနျတကျလာတဲ့သူတှကေ နယျတှပွေနျဖို့ ကွိုးစားကွလိမျ့မယျ။
ဘာတှဆေကျဖွဈမလဲဆိုတာ တှေးကွညျ့ကွပါအုံးဗြာဒါကွောငျ့ အစိုးရက တဆငျ့ခငျြးသှားနရေတာအခုမွို့နယျ ခုနဈမွို့နယျမှာ Semi Lockdown စလုပျနရေတာ။
အမေရိကန် Lockdown ၊ဂျာ မဏီ Lockdown ၊ အိန္ဒိယ Lockdown နှင့် မြန်မာပြည် Lockdown ခြားနားချက်
လ တ်တေ လာ ပြောနေကြ တဲ့ Lockdown.
Lockdown လုပ်ပါဆိုပြီး ရှေ့ဆုံးနေ တောင်းဆိုခဲ့တဲ့အထဲမှာ ကျွန်တော်ပါပါတယ်။
တကယ်လက်တွေ့မြေပြင်မှာကျတော့ Lockdown လုပ်ဖို့ဆိုတာ ဘယ်နှစ်ရက်လုပ်မှာလဲ၊ဘယ်လောက်ကြာကြာလုပ်ထားကြမလဲဆိုတာအတွက် အဖြေမရှိပါဖူး။
အမေရိကန်မှာ Lockdown လုပ်ထားတော့စီးပွားရေး ပက်ပက်စက်စက် ထိခိုက်၊အလုပ်လက်မဲ့တွေ တအားများလာဒါကြောင့်အမေရိကန် သမ္မတက Lockdown ပြန်ဖွင့်ဖို့အားထုတ်နေပါတယ်။
ဂျာမနီမှာလဲ ထိုနည်းလည်းကောင်းဘဲ.. Lockdown ဆက်ထားရမှာလား၊ ဖွင့်ရတော့မှာလာဆိုတာ ဂျာမနီဝန်ကြီးချုပ်အတွက် ခက်ခဲနတယ်။
နောက်တချက်အိန္ဒိယမှာ ရောဂါပိုးစတွေ့ထဲက အိန္ဒိယအစိုးရက lockdown နှစ်ပတ်ကြေငြာပြီးတနိုင်ငံလုံးကို အိမ်အပြင်မထွက်ရ အမိန့်ထုတ်လိုက်တယ် အိမ်အပြင်ထွက်တဲ့သူတွေကို ရဲတွေက တုတ်တွေနဲ့ လိုက်ရိုက်ကြတယ် ။နှစ်ပတ်ပြည့်လို့ Lockdown ရက်ထပ်တိုးမယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့အချိန်အိန္ဒိယနိုင်ငံနယူးဒေလီမြို့မှာလူပေါင်းသန်းနဲ့ချီပြီးလမ်းပေါ်ထွက်လာကြတယ်။သူတို့ပြောတာက မြို့ပေါ်တက်လာအလုပ်လုပ်ဖို့အခုကအိမ်တွင်းအောင်းနေရတယ်အစာအ ငတ်ခံပြီးတော့အသေမခံနိုင်ဖူး ရွာကိုပြန်ကြမယ့်ဆိုတဲ့လူအုပ်ကြီးအစိုးရကထိုင်ကြည့်နေရတယ်အခု india မှာပိုးတွေ့လူနာတွေတရှိန်ထိုးတက်လာနေတယ်။
မြန်မာပြည်မှာရောအခုချိန် ပိုးတွေ့တာ ကိုးဆယ်လောက်ရှိနေပြီ။အခုချိန် Lockdown ချလိုက်ရင်မရဖူးလားရတာပေါ့ဗျာ။
Lockdown ချရတာ ဘာမှ မခက်ဖူး Lockdown ကို ဘယ်နှစ်ရက်အထိလုပ်မှာလဲဆိုတာ ဘယ်သူ့ဆီမှာမှ အဖြေမရှိဖူးအခုချိန် Lockdown လုပ်လိုက်ပြီးမှ လကုန်တဲ့အချိန်မှာမပြောကောင်းမဆိုကောင်းပိုးတွေထပ်တွေ့ရင် Lockdown ကို ဆက်လုပ်မှာလားပြန်ဖွင့်ရမှာလား။
Lockdown လုပ်တာ ရက်ကြာတာနဲ့အမျှ စီးပွားရေး ပိုးဆိုးပက်စက်ထိမယ်… ဆင်းရဲသားတွေ၊ တနေ့လုပ်တနေ့စားတွေ သူတို့ဘဝတွေးတောင် မတွေးရဲဖူး…အစိုးရကရောသူတို့အတွက် ဘယ်နှစ်ရက်စာလောက် ထောက်ပံ့ပေးနိုင်မှာလဲ။ငတ်လာတဲ့အချိန် ဆင်းရဲသားတွေ လမ်းပေါ်ရောက်လာမယ်၊ အလုပ်လုပ်ဖို့ဆိုပြီး ရန်ကုန်တက်လာတဲ့သူတွေက နယ်တွေပြန်ဖို့ ကြိုးစားကြလိမ့်မယ်။
ဘာတွေဆက်ဖြစ်မလဲဆိုတာ တွေးကြည့်ကြပါအုံးဗျာဒါကြောင့် အစိုးရက တဆင့်ချင်းသွားနေရတာအခုမြို့နယ် ခုနစ်မြို့နယ်မှာ Semi Lockdown စလုပ်နေရတာ။
တကိုယျကောငျးဆနျခွငျးဟာ ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈထကျ ပိုဆိုးတယျလို့ ပုပျရဟနျးမငျးကွီး ပွောဆို
ပုပျရဟနျးမငျးကွီး ဖရနျစဈက တကိုယျကောငျးဆနျခွငျးဟာ ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈထကျ ဆိုးတယျလို့ ဧပွီ ၁၉ ရကျမှာ ပွောလိုကျပါတယျ။တကမ်ဘာလုံး သှေးစညျးညီညှတျမှုမရှိဘဲ ရှဆေ့ကျမယျဆိုရငျ ဒါမှမဟုတျ ပွနျနာလနျထူလာတဲ့ လူ့အဖှဲ့အစညျး အစိတျအပိုငျးကို ဖယျထားခဲ့ရငျ ပိုဆိုးတဲ့ တကိုယျကောငျးဆနျခွငျး ဗိုငျးရပျဈသငျ့တဲ့ ရလဒျကို ခံစားရလိမျ့မယျလို့ ပုပျရဟနျးမငျးကွီးက ပွောရငျး COVID-19 အကပျြအတညျးအပွီး ကမ်ဘာပျေါမှာအားလုံးကို လကျခံနိုငျတဲ့ အမွငျကိုထားကွဖို့လညျး ဆျောသွပါတယျ။
ပုပျရဟနျးမငျးကွီးဟာ ဘုရားသခငျရဲ့ ကရုဏာတျောနေ့ အထိမျးအမှတျအနနေဲ့ လူမရှိသလောကျ ဖွဈနတေဲ့ ခရဈယာနျ ဘုရားကြောငျးထဲမှာ ဝတျပွုဖို့ အခြိနျတလကြျောအတှငျး ပထမဆုံးအကွိမျ ဗာတီကနျ နနျးတျောကနေ ထှကျလာတာပါ။ခုခြိနျဟာ ကမ်ဘာတလှား တရားမမြှတမှုကို ကုစားဖိုက အခြိနျပဲ ဘာလို့လဲဆိုတော့ လူသားထု တရပျလုံးရဲ့ ကနျြးမာရေးကို ကူးစကျကပျဘေးက လှိုကျစားနလေို့ပဲလို့ ပုပျရဟနျးမငျးကွီးက ပွောပါတယျ။
ဆငျးရဲသားတှေ အပါအဝငျ ဘယျသူမဆို ကပျဘေးနာလနျထခြိနျမှာ ကနျြနခေဲ့သူတှကေို မစတေးသငျ့ဘူးလို့ ပုပျရဟနျးမငျးကွီးက ပွောပါတယျ။သူဟာ ကမ်ဘာ့ရောဂါကပျဘေး အဆုံးသတျရေးအတှကျ ဘုရားကြောငျး ၂ ဆောငျမှာ ဆုတောငျးဖို့ မတျ ၁၅ ရကျက ရုမျးမွို့တျောထဲကို စှနျ့စားဝငျရောကျခဲ့သူပါ။
Pope Francis leads Mass and the Regina Coeli prayer in Rome's Santo Spirito in Sassia church without public participation due to an outbreak of the coronavirus (COVID-19) disease, in Rome, Italy, April 19, 2020. Vatican Media/Handout via REUTERS
ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈ ကူးစကျမှုကွောငျ့ အီတလီမှာ လူအယောကျ ၂ သောငျး ၃ ထောငျကြျော သဆေုံးခဲ့ပွီး ဗာတီကနျစီးတီးမှာတော့ သီတငျးပတျ ခွောကျပတျနီးပါး အသှားအလာကနျ့သတျ လော့ဒေါငျးခထြားပါတယျ။
တကိုယ်ကောင်းဆန်ခြင်းဟာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ထက် ပိုဆိုးတယ်လို့ ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး ပြောဆို
ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး ဖရန်စစ်က တကိုယ်ကောင်းဆန်ခြင်းဟာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ထက် ဆိုးတယ်လို့ ဧပြီ ၁၉ ရက်မှာ ပြောလိုက်ပါတယ်။တကမ္ဘာလုံး သွေးစည်းညီညွတ်မှုမရှိဘဲ ရှေ့ဆက်မယ်ဆိုရင် ဒါမှမဟုတ် ပြန်နာလန်ထူလာတဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်း အစိတ်အပိုင်းကို ဖယ်ထားခဲ့ရင် ပိုဆိုးတဲ့ တကိုယ်ကောင်းဆန်ခြင်း ဗိုင်းရပ်စ်သင့်တဲ့ ရလဒ်ကို ခံစားရလိမ့်မယ်လို့ ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးက ပြောရင်း COVID-19 အကျပ်အတည်းအပြီး ကမ္ဘာပေါ်မှာအားလုံးကို လက်ခံနိုင်တဲ့ အမြင်ကိုထားကြဖို့လည်း ဆော်သြပါတယ်။
ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးဟာ ဘုရားသခင်ရဲ့ ကရုဏာတော်နေ့ အထိမ်းအမှတ်အနေနဲ့ လူမရှိသလောက် ဖြစ်နေတဲ့ ခရစ်ယာန် ဘုရားကျောင်းထဲမှာ ဝတ်ပြုဖို့ အချိန်တလကျော်အတွင်း ပထမဆုံးအကြိမ် ဗာတီကန် နန်းတော်ကနေ ထွက်လာတာပါ။ခုချိန်ဟာ ကမ္ဘာတလွှား တရားမမျှတမှုကို ကုစားဖိုက အချိန်ပဲ ဘာလို့လဲဆိုတော့ လူသားထု တရပ်လုံးရဲ့ ကျန်းမာရေးကို ကူးစက်ကပ်ဘေးက လှိုက်စားနေလို့ပဲလို့ ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးက ပြောပါတယ်။
ဆင်းရဲသားတွေ အပါအဝင် ဘယ်သူမဆို ကပ်ဘေးနာလန်ထချိန်မှာ ကျန်နေခဲ့သူတွေကို မစတေးသင့်ဘူးလို့ ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးက ပြောပါတယ်။သူဟာ ကမ္ဘာ့ရောဂါကပ်ဘေး အဆုံးသတ်ရေးအတွက် ဘုရားကျောင်း ၂ ဆောင်မှာ ဆုတောင်းဖို့ မတ် ၁၅ ရက်က ရုမ်းမြို့တော်ထဲကို စွန့်စားဝင်ရောက်ခဲ့သူပါ။
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်မှုကြောင့် အီတလီမှာ လူအယောက် ၂ သောင်း ၃ ထောင်ကျော် သေဆုံးခဲ့ပြီး ဗာတီကန်စီးတီးမှာတော့ သီတင်းပတ် ခြောက်ပတ်နီးပါး အသွားအလာကန့်သတ် လော့ဒေါင်းချထားပါတယ်။
သူမကွောငျ့ Lock Down ခခြံရတဲ့ ပွညျသူတှကေိုအနူး အညှတျတောငျးပနျခဲ့တဲ့သီရိရှငျးသနျ့
သရုပျဆောငျနဲ့ မျောဒယျသီရိရှငျးသနျ့ကတော့ ဘာသာရေးပှဲအခမျးအနားတဈခုကို တကျရောကျခဲ့တာကွောငျ့ Covid – 19 သံသယရှိလူနာအဖွဈ လူမှုကှနျယကျမှာ ပြံ့နှံ့ခဲ့တာပဲ ဖွဈပါတယျ။ သီရိရှငျးသနျ့ရဲ့ ဆေးစဈခကျြအဖွကေ Negative ဖွဈပမေယျ့ Quaratine ဝငျနရေတာပဲ ဖွဈပါတယျ။ ဒီနမှေ့ာတော့သီရိရှငျးသနျ့ကသူမနထေိုငျရာအလုံမွို့နယျကပွညျသူတှကေိုအခုလိုပဲတောငျးပနျစကားလေး ပွောထားပါတယျ။
“သီရိကွောငျ့ lock down အခခြံထားရတဲ့ နှငျးဆီကုနျးလမျး အလုံမွို့နယျ မှာရှိတဲ့ Golden Rose Condo မှာ နထေိုငျကွသောမိသားစုဝငျမြားအားလုံးကို ဒီနရောကနပွေီးတာ့အနူးညှတျတောငျးပနျပါတယျနျော။သီရိကွောငျ့စိတျအနှောကျအယှကျဖွဈခဲ့ရတာတှအေဆငျမပွဖွေဈခဲ့ရတာတှစေိတျမလုံမခွုံ ဖွဈခဲ့ရတာတှကျ ဒီ Facebook စာမကျြနှာမှ တဆငျ့ တဈဦးတဈယောကျခငျြးဆီကို တောငျး ပနျခငျြပါတယျ။ Negative ဖွဈတဲ့အတှကျသကျဆိုငျရာမှတာဝနျရှိသူမြားလဲ Condo lock down ကိစ်စကိုအမွနျဆုံးတာဝနျယူဖွရှေငျးပေးဖို့မတ်ေတာရပျခံခငျြပါတယျရှငျ့။မညျသူတဈဦးတဈယောကျကိုမှ ထိခိုကျနဈနာလိုခွငျးမရှိပါ။ခုခြိနျမှာ ၂၁ ရကျ Quaratine ဝငျနတောဖွဈတဲ့တှကျဘယျ media နဲ့မှ အငျတာဗြူး ဖွဖေို့အဆငျမပွဖွေဈတဲ့တှကျလဲ တောငျးပနျပါတယျရှငျ့။”
“သီရိရဲ့မိသားစုဝငျတှကေိုလဲစိတျအနှောကျအယှကျ ဖွဈစတေဲ့ စာတှပေို့ခွငျး ၊ ဖုနျးဆကျမေးမွနျးခွငျး မညျသူတဈဦးတဈယောကျမှမပွုလုပျပေးဖို့ရနျ မတ်ေတာ ရပျခံခငျြပါတယျရှငျ့။ခဈြခငျစှာဖွငျ့ မေးမွနျးကွသော ဂရုစိုကျပေးကွသော Quaratine centre မှာ လိုအပျတာတှေ အားလုံးဖွညျ့ဆညျးပေးကွသော သီရိ ခဈြတဲ့ ပရိသတျမြား ညီအကိုမောငျနှမမြား သူငယျခငျြးမိတျဆှမြေား ခဈြခငျကွတဲ့ တဈဦးတဈယောကျခငျြးဆီကိုလဲ ကြေးဇူးအထူးတငျရှိပါတယျရှငျ့။ ခုလိုခြိနျမှာဘယျသူကမိတျဆှစေဈ မိတျဆှမှေနျလဲဆိုတာသိခှငျ့ရလို့လဲအားလုံး ကြေး ဇူးတငျပါတယျ။စိတျပူအောငျလုပျခဲ့မိလို့ အဖနေဲ့ အမညေီမလေး ၂ ယောကျနဲ့ မောငျလေးကိုလဲတောငျးပနျပါတယျ ။ ကြေးဇူးတငျထိုကျတဲ့သူတှေ အားလုံးကို ကြေးဇူးတငျသလိုတောငျးပနျသငျ့တဲ့သူ အားလုံးကိုလဲဒီနရောကနေ တောငျးပနျပါတယျရှငျ့။”
“ဘာသာရေးနဲ့ပတျသတျပွီး ဘာမှ မမနျ့ကွဖို့နဲ့သတငျးလုပျပွီးမရေးကွဖို့ အခငျြး ခငျြး ထိခိုကျနဈနာစမေယျ့ စကားတှေ မပွောကွပဲမတ်ေတာဖွငျ့သာတဈဦးကို တဈဦးဖေးမကူညီကွဖို့အားလုံးကို မတ်ေတာ ရပျခံခငျြပါတယျရှငျ့။သီရိကအနုပညာရှငျမို့မဟုတျမမှနျသတငျးတှဘောတှပေဲ ပွောပါစအေပွောအဆိုခံနိုငျပမေယျ့ သီရိရဲ့မိသားစုနဲ့မောငျနှမတှကေို ကိုယျ ခငျြးစာတရားလေးထားပေးဖို့ မတ်ေတာရပျခံခငျြပါတယျနျော။အားလုံးကိုကြေးဇူးတငျပါတယျ။သီရိကိုခဈြတဲ့သူတှရေော မခဈြတဲ့သူတှရေော အားလုံးကို သီရိကခဈြပါတယျလို့ ပွောခငျြပါတယျ။” ဆိုပွီး သူမရဲ့ ဖစျေ့ဘုတျစာမကျြနှာကနေ ပွောထားပါတယျ။
သူမကြောင့် Lock Down ချခံရတဲ့ ပြည်သူတွေကိုအနူးအညွတ်တောင်းပန်ခဲ့တဲ့သီရိရှင်းသန့်
သရုပ်ဆောင်နဲ့ မော်ဒယ်သီရိရှင်းသန့်ကတော့ ဘာသာရေးပွဲအခမ်းအနားတစ်ခုကို တက်ရောက်ခဲ့တာကြောင့် Covid – 19 သံသယရှိလူနာအဖြစ် လူမှုကွန်ယက်မှာ ပျံ့နှံ့ခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သီရိရှင်းသန့်ရဲ့ ဆေးစစ်ချက်အဖြေက Negative ဖြစ်ပေမယ့် Quaratine ဝင်နေရတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေ့မှာတော့သီရိရှင်းသန့်ကသူမနေထိုင်ရာအလုံမြို့နယ်ကပြည်သူတွေကိုအခုလိုပဲတောင်းပန်စကားလေး ပြောထားပါတယ်။
“သီရိကြောင့် lock down အချခံထားရတဲ့ နှင်းဆီကုန်းလမ်း အလုံမြို့နယ် မှာရှိတဲ့ Golden Rose Condo မှာ နေထိုင်ကြသောမိသားစုဝင်များအားလုံးကို ဒီနေရာကနေပြီးတာ့အနူးညွှတ်တောင်းပန်ပါတယ်နော်။သီရိကြောင့်စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်ခဲ့ရတာတွေအဆင်မပြေဖြစ်ခဲ့ရတာတွေစိတ်မလုံမခြုံ ဖြစ်ခဲ့ရတာတွက် ဒီ Facebook စာမျက်နှာမှ တဆင့် တစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်းဆီကို တောင်း ပန်ချင်ပါတယ်။ Negative ဖြစ်တဲ့အတွက်သက်ဆိုင်ရာမှတာဝန်ရှိသူများလဲ Condo lock down ကိစ္စကိုအမြန်ဆုံးတာဝန်ယူဖြေရှင်းပေးဖို့မေတ္တာရပ်ခံချင်ပါတယ်ရှင့်။မည်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်ကိုမှ ထိခိုက်နစ်နာလိုခြင်းမရှိပါ။ခုချိန်မှာ ၂၁ ရက် Quaratine ဝင်နေတာဖြစ်တဲ့တွက်ဘယ် media နဲ့မှ အင်တာဗျူး ဖြေဖို့အဆင်မပြေဖြစ်တဲ့တွက်လဲ တောင်းပန်ပါတယ်ရှင့်။”
“သီရိရဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုလဲစိတ်အနှောက်အယှက် ဖြစ်စေတဲ့ စာတွေပို့ခြင်း ၊ ဖုန်းဆက်မေးမြန်းခြင်း မည်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်မှမပြုလုပ်ပေးဖို့ရန် မေတ္တာ ရပ်ခံချင်ပါတယ်ရှင့်။ချစ်ခင်စွာဖြင့် မေးမြန်းကြသော ဂရုစိုက်ပေးကြသော Quaratine centre မှာ လိုအပ်တာတွေ အားလုံးဖြည့်ဆည်းပေးကြသော သီရိ ချစ်တဲ့ ပရိသတ်များ ညီအကိုမောင်နှမများ သူငယ်ချင်းမိတ်ဆွေများ ချစ်ခင်ကြတဲ့ တစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်းဆီကိုလဲ ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ရှင့်။ ခုလိုချိန်မှာဘယ်သူကမိတ်ဆွေစစ် မိတ်ဆွေမှန်လဲဆိုတာသိခွင့်ရလို့လဲအားလုံး ကျေး ဇူးတင်ပါတယ်။စိတ်ပူအောင်လုပ်ခဲ့မိလို့ အဖေနဲ့ အမေညီမလေး ၂ ယောက်နဲ့ မောင်လေးကိုလဲတောင်းပန်ပါတယ် ။ ကျေးဇူးတင်ထိုက်တဲ့သူတွေ အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်သလိုတောင်းပန်သင့်တဲ့သူ အားလုံးကိုလဲဒီနေရာကနေ တောင်းပန်ပါတယ်ရှင့်။”
“ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သတ်ပြီး ဘာမှ မမန့်ကြဖို့နဲ့သတင်းလုပ်ပြီးမရေးကြဖို့ အချင်း ချင်း ထိခိုက်နစ်နာစေမယ့် စကားတွေ မပြောကြပဲမေတ္တာဖြင့်သာတစ်ဦးကို တစ်ဦးဖေးမကူညီကြဖို့အားလုံးကို မေတ္တာ ရပ်ခံချင်ပါတယ်ရှင့်။သီရိကအနုပညာရှင်မို့မဟုတ်မမှန်သတင်းတွေဘာတွေပဲ ပြောပါစေအပြောအဆိုခံနိုင်ပေမယ့် သီရိရဲ့မိသားစုနဲ့မောင်နှမတွေကို ကိုယ် ချင်းစာတရားလေးထားပေးဖို့ မေတ္တာရပ်ခံချင်ပါတယ်နော်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။သီရိကိုချစ်တဲ့သူတွေရော မချစ်တဲ့သူတွေရော အားလုံးကို သီရိကချစ်ပါတယ်လို့ ပြောချင်ပါတယ်။” ဆိုပြီး သူမရဲ့ ဖေ့စ်ဘုတ်စာမျက်နှာကနေ ပြောထားပါတယ်။
သှားတိုကျဆေး သုံးပွီးတော့ ဆားဝကျခွံကို အလှယျတကူ ဖယျရှားနညျး
ဆားဝကျခွံကို လိမျးဆေး အမြိုးမြိုး မလိမျးလိုပဲ သဘာဝနညျးလမျးဖွငျ့ ဖယျရှားလိုသူမြားတှေအတှကျ ဆေးနညျးလေးကို အခုလိုပဲ မှဝြပေေးလိုကျပါတယျ။
၁။ သှားတိုကျဆေး( တဈမြိုးမြိုး )နှငျ့ အိမျသုံးဆားကို ခှကျအသနျ့တဈခုထဲတှငျ အနတေျောလေး ဆတူ ရောစပျပါ။
၂။ ပွီးရငျ မိမိသုံးနကြေ မကျြနှာသဈဆေးတဈမြိုးမြိုးဖွငျ့ မကျြနှာကို သနျ့စငျအောငျ သဈပါ။
၁။ ညဖကျတှငျလိမျးခွယျစရာမိတျကပျအမြိုးမြိုး ၊ Suncream အမြိုးမြိုးတို့ကို လိမျးခွယျပွီးလှငျြ မကျြနှာသဈပွီးမှသာ အိပျယာဝငျပါ။
၂။ ဆောငျးတှငျးနှငျ့ အေးတဲ့အခြိနျ မကျြနှာမသဈနိုငျလှငျြ မိတျကပျဖကျြရညျဖွငျ့ ဖကျြပွီးမှ အိပျယာဝငျပါ။
၅။ ဆေးအရှိနျကွောငျ့ အပွငျကို စူထှကျလာသညျ့ မှဲ့ခွောကျကဲ့သို့သောဆားဝကျခွံ အမှဈြလေးမြားကိုလကျဖွငျ့သျော၎ငျး၊မကျြနှာတိုကျဖတျဖွငျ့သျော၎ငျး၊သှားပှတျတံဖွငျ့သျော၎ငျး ညငျသာစှာ ပှတျတိုကျပေးနိုငျပါတယျ။( ပွငျးပွငျးထနျထနျ မတိုကျရပါ )။
၆။ သနျ့စငျပွီးသော မကျြနှာအား ခြှေးပေါကျ မကယျြစရေနျ PRAEL Skincare သို့မဟုတျ တိုနာ( Toner ) တဈခုခု လိမျးပေးထားနိုငျပါတယျ။ဒီနညျးကို အနညျး ဆုံးတဈပတျ တဈကွိမျခနျ့ ပွုလုပျပေးပါကဆားဝကျခွံမြားကငျးစငျပွီး မကျြနှာကိုခြောမှတျလှပလာစပေါလိမျ့မယျ။
၃။ ရောစပျထားသောဆေးကိုဆားဝကျခွံပျေါကို ခပျပါးပါးလေးသုတျလိမျးပေးပါ။ (အထူကွီး မလိမျးရပါ)။ မကျြစိ၊ ပါးစပျ၊ နှာခေါငျးတို့ကို မဝငျပါစနှေငျ့။
၄။ သှားတိုကျဆေးနှငျ့ဆားဓာတျကွောငျ့ လိမျးထားသညျ့ နရောမှာ အနညျးငယျ ပူရှိနျးရှိနျး ခံစားရပါလိမျ့မယျ။ ခဏဆိုလှငျြ ပွနျပြောကျမညျ။( ၁၅ )မိနဈခနျ့ ထားပွီးလှငျြမကျြနှာကို ရဖွေငျ့ ဆေးကွော သနျ့စငျလိုကျပါ။ (မကျြနှာသဈဆေးရညျကို သုံးရနျမလိုပါ)။
သွားတိုက်ဆေး သုံးပြီးတော့ ဆားဝက်ခြံကို အလွယ်တကူ ဖယ်ရှားနည်း
ဆားဝက်ခြံကို လိမ်းဆေး အမျိုးမျိုး မလိမ်းလိုပဲ သဘာဝနည်းလမ်းဖြင့် ဖယ်ရှားလိုသူများတွေအတွက် ဆေးနည်းလေးကို အခုလိုပဲ မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။
၁။ သွားတိုက်ဆေး( တစ်မျိုးမျိုး )နှင့် အိမ်သုံးဆားကို ခွက်အသန့်တစ်ခုထဲတွင် အနေတော်လေး ဆတူ ရောစပ်ပါ။
၂။ ပြီးရင် မိမိသုံးနေကျ မျက်နှာသစ်ဆေးတစ်မျိုးမျိုးဖြင့် မျက်နှာကို သန့်စင်အောင် သစ်ပါ။
၁။ ညဖက်တွင်လိမ်းခြယ်စရာမိတ်ကပ်အမျိုးမျိုး ၊ Suncream အမျိုးမျိုးတို့ကို လိမ်းခြယ်ပြီးလျှင် မျက်နှာသစ်ပြီးမှသာ အိပ်ယာဝင်ပါ။
၂။ ဆောင်းတွင်းနှင့် အေးတဲ့အချိန် မျက်နှာမသစ်နိုင်လျှင် မိတ်ကပ်ဖျက်ရည်ဖြင့် ဖျက်ပြီးမှ အိပ်ယာဝင်ပါ။
၅။ ဆေးအရှိန်ကြောင့် အပြင်ကို စူထွက်လာသည့် မှဲ့ခြောက်ကဲ့သို့သောဆားဝက်ခြံ အမျှစ်လေးများကိုလက်ဖြင့်သော်၎င်း၊မျက်နှာတိုက်ဖတ်ဖြင့်သော်၎င်း၊သွားပွတ်တံဖြင့်သော်၎င်း ညင်သာစွာ ပွတ်တိုက်ပေးနိုင်ပါတယ်။( ပြင်းပြင်းထန်ထန် မတိုက်ရပါ )။
၆။ သန့်စင်ပြီးသော မျက်နှာအား ချှေးပေါက် မကျယ်စေရန် PRAEL Skincare သို့မဟုတ် တိုနာ( Toner ) တစ်ခုခု လိမ်းပေးထားနိုင်ပါတယ်။ဒီနည်းကို အနည်း ဆုံးတစ်ပတ် တစ်ကြိမ်ခန့် ပြုလုပ်ပေးပါကဆားဝက်ခြံများကင်းစင်ပြီး မျက်နှာကိုချောမွတ်လှပလာစေပါလိမ့်မယ်။
၃။ ရောစပ်ထားသောဆေးကိုဆားဝက်ခြံပေါ်ကို ခပ်ပါးပါးလေးသုတ်လိမ်းပေးပါ။ (အထူကြီး မလိမ်းရပါ)။ မျက်စိ၊ ပါးစပ်၊ နှာခေါင်းတို့ကို မဝင်ပါစေနှင့်။
၄။ သွားတိုက်ဆေးနှင့်ဆားဓာတ်ကြောင့် လိမ်းထားသည့် နေရာမှာ အနည်းငယ် ပူရှိန်းရှိန်း ခံစားရပါလိမ့်မယ်။ ခဏဆိုလျှင် ပြန်ပျောက်မည်။( ၁၅ )မိနစ်ခန့် ထားပြီးလျှင်မျက်နှာကို ရေဖြင့် ဆေးကြော သန့်စင်လိုက်ပါ။ (မျက်နှာသစ်ဆေးရည်ကို သုံးရန်မလိုပါ)။
ကိုဗဈရောဂါကွီး မပွီးမခငျြး အဆောငျလခ မယူတော့ဘူးဆိုတဲ့ ရှပွေညျသာက အဆောငျပိုငျရှငျတဈဦး
လေးစားထိုကျတဲ့ လူပီသတဲ့ စိတျထား
ရှပွေညျသာမွို့နယျတှငျCovid 19 ကာကှယျရေး ကာလအတှငျး အဆောငျနအေလုပျသမားမြားအား အလုပျပွနျမဆငျးရမခငျြးအဆောငျလခမြား မယူတော့ပဲ ကငျးလှတျခှငျ့ပေးထားကွောငျး အဆောငျပိုငျရှငျမြားထံမှသိရသညျ။
“ကနြျောက အဆောငျပိုငျရှငျလညျးဟုတျတယျ အဆောငျမှူးလညျးဟုတျတယျ ကိုယျခငျြးစာနာလို့ ဒီကပျဘေးကွီးက မလှတျမခငျြး ကြှနျတော့အဆောငျမှာနတေဲ့ အခနျးတိုငျးကို လစာမကောကျတော့ဘူး အဆောငျလခ ကငျးလှတျခှငျ့ကို
ဒီလဧပွီလကစပွီး ပေးထားလိုကျပါပွီ တဈခြို့လူတှလေညျးလြော့ယူတာတို့ လုံးလုံးမယူနတောတို့ လုပျကုနျကွပွီလို့ ကွားရပါတယျ”ဟု ရှပွေညျသာ အမှတျ၁၂ရပျကှကျ စပယျလမျးမှNLD ဥက်ကဌလညျးဖွဈ
အဆောငျပိုငျရှငျလညျးဖွဈသူ ဦးစိုးလှငျကပွောသညျ။ ရှပွေညျသာမွို့နယျ ၁၂ရပျကှကျတှငျ ၅ခနျးတှဲ၆ခနျးတှဲအဆောငျပေါငျးတဈရာကြျောရှိနကွေောငျးသိရသညျ။ ရှဘေ ZN.H
ကိုဗစ်ရောဂါကြီး မပြီးမချင်း အဆောင်လခ မယူတော့ဘူးဆိုတဲ့ ရွှေပြည်သာက အဆောင်ပိုင်ရှင်တစ်ဦး
လေးစားထိုက်တဲ့ လူပီသတဲ့ စိတ်ထား
ရွေပြည်သာမြို့နယ်တွင်Covid 19 ကာကွယ်ရေး ကာလအတွင်း အဆောင်နေအလုပ်သမားများအား အလုပ်ပြန်မဆင်းရမချင်းအဆောင်လခများ မယူတော့ပဲ ကင်းလွတ်ခွင့်ပေးထားကြောင်း အဆောင်ပိုင်ရှင်များထံမှသိရသည်။
“ကျနော်က အဆောင်ပိုင်ရှင်လည်းဟုတ်တယ် အဆောင်မှူးလည်းဟုတ်တယ် ကိုယ်ချင်းစာနာလို့ ဒီကပ်ဘေးကြီးက မလွတ်မချင်း ကျွန်တော့အဆောင်မှာနေတဲ့ အခန်းတိုင်းကို လစာမကောက်တော့ဘူး အဆောင်လခ ကင်းလွတ်ခွင့်ကို
ဒီလဧပြီလကစပြီး ပေးထားလိုက်ပါပြီ တစ်ချို့လူတွေလည်းလျော့ယူတာတို့ လုံးလုံးမယူနေတာတို့ လုပ်ကုန်ကြပြီလို့ ကြားရပါတယ်”ဟု ရွေပြည်သာ အမှတ်၁၂ရပ်ကွက် စပယ်လမ်းမှNLD ဥက္ကဌလည်းဖြစ်
အဆောင်ပိုင်ရှင်လည်းဖြစ်သူ ဦးစိုးလွင်ကပြောသည်။ ရွေပြ ည်သာမြို့နယ် ၁၂ရပ်ကွက်တွင် ၅ခန်းတွဲ၆ခန်းတွဲအဆောင်ပေါင်းတစ်ရာကျော်ရှိနေကြောင်းသိရသည်။ ရွှေဘ ZN.H
အငျဒိုနီးရှားနိုငျငံမှာ Covid-19 ကိုအလေးမထားဘဲ ဘာသာဝငျထောငျနဲ့ခြီ စုဝေးမှုဖွဈပျေါခဲ့
အငျဒိုနီးရှားနိုငျငံ၊ အာခြေးပွညျနယျက နာမညျကွီးဗလီတဈခုမှာ ဘာသာဝငျတှဟော ကိုဗဈကပျရောဂါဆိုးကွောငျ့ Lockdown ထုတျပွနျထားတာကို ဂရုမစိုကျဘဲ ဘာသာဝငျထောငျနဲ့ခြီ စုဝေးမှုဖွဈပျေါခဲ့ကွောငျး သိရပါတယျ။ ပွီးခဲ့တဲ့သောကွာနကေ့ ဝတျပွုဆုတောငျးပှဲမှာ စုရုံးခဲ့တာဖွဈပွီး၊ ပုံထဲမှာ အားလုံးမွငျတဲ့အတိုငျးပဲ စနဈတကြ Social distancing လညျး လုပျထားတာကို မတှရေ့ပါဘူး။ ကူးစကျမွနျ ကပျဆိုးကာလအတှငျးမှာ ဒီလုပျရပျဟာ အလှနျအန်တရာယျ မြားလှပွီး၊ မကွာသေးခငျကလညျး အငျဒိုနီးရှားနိုငျငံ၊ ဆူလာဝစေီတောငျပိုငျး ဝတျပွုဆုတောငျးပှဲကပွနျလာတဲ့ ထိုငျးနိုငျငံသား (၉၉)ဦးအနကျ (၄၂)ဦးမှာ ကိုဗဈကူးစကျခံခဲ့ရပွီး၊ ဒီအတိုငျး ပွညျတျောပွနျဝငျလာခဲ့လို့ သကျဆိုငျရာ အာဏာပိုငျတှကေ အလှနျပေါကျကှဲခဲ့ကွပါတယျ။ အခုလညျး ဒီလိုအဖွဈမြိုး ဖွဈသှားခဲ့ရငျ အတျော ဒေါသထှကျစရာပါ။
အခု ဝတျပွုဆုတောငျးပှဲဖွဈခဲ့တဲ့ ဧပွီလ(၁၇)ရကျ သောကွာနမှေ့ာ အငျဒိုနီးရှားနိုငျငံရဲ့ ကိုဗဈကူးစကျလူနာဦးရေ (၄၀၇)ဦးအထိ တိုးပှားစခေဲ့တာဖွဈပွီး၊ အငျဒိုနီးရှားဟာ အခုဆိုရငျ ကိုဗဈကူးစကျခံရသူ စုစုပေါငျး (၆၂၄၈)ဦးအထိ ရှိသှားပါပွီ။ သဆေုံးသူကတော့ (၅၃၅)ဦးဖွဈပွီး၊ ပွနျလညျကောငျးမှနျလာသူမှာ (၆၃၁)ဦးအထိ ရှိလာခဲ့ပါတယျ။ ၎င်းငျးနိုငျငံ ကနျြးမာရေးဝနျကွီးဌာနရဲ့ထုတျပွနျမှုအရ လူပေါငျး (၄၂၀၀၀)ကြျော စဈဆေးပွီးပွီလို့ ဆိုပါတယျ။
အငျဒိုနီးရှားရဲ့ ရောဂါကူးစကျမှုနှုနျးဟာ ဖိလဈပိုငျကိုတောငျ ကြျောတကျသှားခဲ့ပွီး၊ ဖိလဈပိုငျမှာတော့ လကျရှိစာရငျးအရ (၆၀၈၇)ဦး ကူးစကျခံရကား၊ (၃၉၇)ဦးသဆေုံးကာ၊ (၅၁၆)ဦး ပွနျလညျကောငျးမှနျထားကွောငျး သိရပါတယျ။ အခုစုဝေးဝတျပွုပှဲဟာ တဈခွားနိုငျငံကလူတှထေကျ အာခြေွး့ပညျနယျအခွစေိုကျ အာခြေးမှတျစလငျဘာသာဝငျ အမြားစုဖွဈပွီး၊ ဒီအထဲမှာ တဈဦးတဈယောကျသာ ရောဂါပိုးရှိနခေဲ့ရငျ အငျဒိုအတှကျ မလှယျပါဘူး။
၎င်းငျးတို့စုဝေးခဲ့ရာ ဗလီကတော့ Lhokseumawe မှာတညျရှိတဲ့ ပွညျနယျရဲ့အကွီးဆုံးဗလီမှာဖွဈပွီး၊ ဆူမားတွားရဲ့ မွောကျဘကျအကဆြုံးနယျမွမှော တညျရှိပါတယျ။ ပိုဆိုးတာကတော့ တျောတျောမြားမြားဟာ ယုံကွညျမှုကို အယုံလှနျပွီး၊ အကာအကှယျမကျြနှာဖုံးတှေ တပျဆငျထားခွငျး မရှိကွပါဘူး။ ဒါပမေယျ့ အငျဒိုအာဏာပိုငျတှကေ အခု လူစုလူဝေးကိစ်စနဲ့ပတျသကျပွီး ဘယျလို အရေးယူမလဲဆိုတာ အသံမထှကျသေးပါဘူး။
Credit dkhit media
အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာ Covid-19 ကိုအလေးမထားဘဲ ဘာသာဝင်ထောင်နဲ့ချီ စုဝေးမှုဖြစ်ပေါ်ခဲ့
အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ၊ အာချေးပြည်နယ်က နာမည်ကြီးဗလီတစ်ခုမှာ ဘာသာဝင်တွေဟာ ကိုဗစ်ကပ်ရောဂါဆိုးကြောင့် Lockdown ထုတ်ပြန်ထားတာကို ဂရုမစိုက်ဘဲ ဘာသာဝင်ထောင်နဲ့ချီ စုဝေးမှုဖြစ်ပေါ်ခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့သောကြာနေ့က ဝတ်ပြုဆုတောင်းပွဲမှာ စုရုံးခဲ့တာဖြစ်ပြီး၊ ပုံထဲမှာ အားလုံးမြင်တဲ့အတိုင်းပဲ စနစ်တကျ Social distancing လည်း လုပ်ထားတာကို မတွေ့ရပါဘူး။ ကူးစက်မြန် ကပ်ဆိုးကာလအတွင်းမှာ ဒီလုပ်ရပ်ဟာ အလွန်အန္တရာယ် များလှပြီး၊ မကြာသေးခင်ကလည်း အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ၊ ဆူလာဝေစီတောင်ပိုင်း ဝတ်ပြုဆုတောင်းပွဲကပြန်လာတဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံသား (၉၉)ဦးအနက် (၄၂)ဦးမှာ ကိုဗစ်ကူးစက်ခံခဲ့ရပြီး၊ ဒီအတိုင်း ပြည်တော်ပြန်ဝင်လာခဲ့လို့ သက်ဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်တွေက အလွန်ပေါက်ကွဲခဲ့ကြပါတယ်။ အခုလည်း ဒီလိုအဖြစ်မျိုး ဖြစ်သွားခဲ့ရင် အတော် ဒေါသထွက်စရာပါ။
အခု ဝတ်ပြုဆုတောင်းပွဲဖြစ်ခဲ့တဲ့ ဧပြီလ(၁၇)ရက် သောကြာနေ့မှာ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံရဲ့ ကိုဗစ်ကူးစက်လူနာဦးရေ (၄၀၇)ဦးအထိ တိုးပွားစေခဲ့တာဖြစ်ပြီး၊ အင်ဒိုနီးရှားဟာ အခုဆိုရင် ကိုဗစ်ကူးစက်ခံရသူ စုစုပေါင်း (၆၂၄၈)ဦးအထိ ရှိသွားပါပြီ။ သေဆုံးသူကတော့ (၅၃၅)ဦးဖြစ်ပြီး၊ ပြန်လည်ကောင်းမွန်လာသူမှာ (၆၃၁)ဦးအထိ ရှိလာခဲ့ပါတယ်။
၎င်းနိုင်ငံ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်မှုအရ လူပေါင်း (၄၂၀၀၀)ကျော် စစ်ဆေးပြီးပြီလို့ ဆိုပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားရဲ့ ရောဂါကူးစက်မှုနှုန်းဟာ ဖိလစ်ပိုင်ကိုတောင် ကျော်တက်သွားခဲ့ပြီး၊ ဖိလစ်ပိုင်မှာတော့ လက်ရှိစာရင်းအရ (၆၀၈၇)ဦး ကူးစက်ခံရကား၊ (၃၉၇)ဦးသေဆုံးကာ၊ (၅၁၆)ဦး ပြန်လည်ကောင်းမွန်ထားကြောင်း သိရပါတယ်။ အခုစုဝေးဝတ်ပြုပွဲဟာ တစ်ခြားနိုင်ငံကလူတွေထက် အာချေြး့ပည်နယ်အခြေစိုက် အာချေးမွတ်စလင်ဘာသာဝင် အများစုဖြစ်ပြီး၊ ဒီအထဲမှာ တစ်ဦးတစ်ယောက်သာ ရောဂါပိုးရှိနေခဲ့ရင် အင်ဒိုအတွက် မလွယ်ပါဘူး။
၎င်းတို့စုဝေးခဲ့ရာ ဗလီကတော့ Lhokseumawe မှာတည်ရှိတဲ့ ပြည်နယ်ရဲ့အကြီးဆုံးဗလီမှာဖြစ်ပြီး၊ ဆူမားတြားရဲ့ မြောက်ဘက်အကျဆုံးနယ်မြေမှာ တည်ရှိပါတယ်။ ပိုဆိုးတာကတော့ တော်တော်များများဟာ ယုံကြည်မှုကို အယုံလွန်ပြီး၊ အကာအကွယ်မျက်နှာဖုံးတွေ တပ်ဆင်ထားခြင်း မရှိကြပါဘူး။ ဒါပေမယ့် အင်ဒိုအာဏာပိုင်တွေက အခု လူစုလူဝေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဘယ်လို အရေးယူမလဲဆိုတာ အသံမထွက်သေးပါဘူး။
← Previous Page1 … Page467 Page468 Page469 … Page481 Next →